हामी कति निरिह उपभोक्ता - Nepal Post Daily
हामी कति निरिह उपभोक्ता
तपाईंको भान्सामा भएका जे जति खानेकुरा छन, ती पूर्णत अर्गा्निक छन् ? स्वस्थ्यवर्द्धक छन् ? शुद्ध छन् ?
हामीले साँझ बिहान पकाउने चामल पूर्णत अर्गा्निक छैनन् । सागसब्जीको गुणस्तरमा पनि हामी ढुक्क छैनौँ । किनभने हामी बजारमा आएका सागसब्जीले छाक टार्छौँ । बजारमा आइपुग्ने सागसब्जी व्यवसायिक ढंगले उत्पादन गरिन्छ, जसको गुणस्तर नाप्ने संयन्त्र हामी कहाँ प्रभावकारी छैन । त्यही कारण सागसब्जी उमार्न, फलाउन, भण्डारण गर्न किटनासक, रासायनिक औषधी आदिको प्रयोग गरिन्छ ।
आखिर हामी किन गाँस गाँसमा विष निल्न बाध्य छौँ ? किन हामी हरेक छाकमा अस्वस्थ्यकर खानेकुरा खान बाध्य छौँ ?
खानेकुरा अशुद्ध हुनु, विषादी मिसाइनु आफैँमा अपराध हो । यस्तो अपराध गर्ने छुट कसैलाई छैन । तर, हाम्रो बजारमा गएर नियाल्नुहोस् त, कुन खानेकुरा शुद्ध, अर्गा्निक छन् ? कति खानेकुरा खानलायक छन् ?
कुनैपनि उपभोग्य बस्तु अशुद्ध, कमसल, विषाक्त हुनुहुँदैन । उन्नत मुलुकका नागरिकहरु उपभोक्ता अधिकारबारे सचेत हुन्छन् । राज्य उत्तिकै गंभीर र संवेदनशील हुन्छन् । त्यही कारण फुटपाथमा राखिएका खानेकुरा पनि उनीहरु निर्धक्क खान सक्छन्रपाउँछन् । तर, हामीकहाँ उपभोक्ताहरु निरिह छन् । जस्तोसुकै खानेकुरा पनि खान बाध्य छन् । किनभने यहाँ शुद्धता नाप्ने संयन्त्र छैन । भएपनि त्यो चुस्त र सक्रिय छैन ।
उपभोग्य बस्तुको शुद्धता मात्र होइन, मूल्यमा पनि एकरुपता छैन । जथाभावी र आफुखुसी मूल्य निर्धारण गरिएका छन् । कालोबजारी गरिएका छन् । यही कारण हामीकहाँ उपभोक्ता सधैँ निरिह बन्नुपरेको छ ।
Previous articleनारायणी सिमेन्ट उद्योगका श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परिक्षण समपन्न
Next articleसलमान खान लाई राष्ट्रिय अवार्ड चाहिँदैन ।